कुन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? हेनुहोस् – Sandesh Press
December 4, 2020 173
काठमाडौँ : यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतय सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् । यी महिलाको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रोध भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ ।
ढाड दुख्ने समस्या छ ? अब एउटा अचुक रेसिपी उपलब्ध छ
हरेक मानिसमा हाडजोर्नी दुख्ने समस्या हुन्छ तर यसको पनि समाधान छ !
आषाढ: सआषढमा जन्मिएका महिलाहरू मीठो बोली बोल्छन् । उनीहरूको आवाजमा मधुरता हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । कडा मेहनत र संघर्षमा पनि उनीहरूले सोँचे जस्तो सुख र धन प्राप्त नहुन सक्छ ।
चैत: यो महिनामा जन्मिएका महिला चलाख र चतुर हुन्छन् । सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आकर्षण गर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । कहिलेकाहिँ उनीहरूमा क्रोध हावी हुनाले समस्या पनि ल्याएको हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र ज्ञाताको सहयोगमा
Nextनेपालमा फास्ट ट्रयाकमा खोप ल्याउने तयारी शुरु